यस्तो छ-मनहरी गाउँपालिकामा वर्षाले पुर्याएको क्षति !
मकवानपुर/अविरल वर्षाको कारण मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा मानवीय क्षति नभएपनि धेरै नागरिक पीडामा परेका छन् । साउन २७ गतेबाट सुरु भएको वर्षाका कारण गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा गरी ३ सय भन्दा बढी घर घर पुर्ण रुपमा क्षति भएको पाइएको छ ।
वर्षाको पाचौँ दिन जिल्ला बालकल्याण समिति मकवानपुरको अगुवाइमा बालकल्याण समाज मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक सुशिलराज गिरी, इस्थर बेञ्जामिन स्मृति संस्थाका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक केदार आचार्य र सहयोगी हातहरुको समूह (सहास) नेपालका परियोजना अधिकृत प्रताप श्रेष्ठको संयुक्त टोलीले प्रभावित मनहरी गाउँपालिकाको रमौली र प्रतापपुरमा स्थलगत अनुगमन गरे ।
अनुगमनका क्रममा पूर्ण क्षतिभएका घरका मानिसहरु हाल विद्यालय, चर्च तथा सार्वजनिक भवन, केही आफन्तकोमा आश्रय लिएर बसेको फेला परेको अनुगमनमा सहभागी जिल्ला बाल कल्याण समितीका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रवि हमालले बताए ।
मनहरी गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोको कारण हालसम्म ३ वटा गोरु, केही बाख्रा र हजारौँको संख्यामा लोकल कुखुराहरु मरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीका अनुसार निरन्तर वर्षा भइरहने हो भने मनहरी गाउँपालिकामा मात्रै तीन सय भन्दा बढी घर जोखिममा पर्नसक्ने छन् ।
पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणक्षेत्र संरक्षणको लागि वन विस्तार गर्नुपर्ने भएपछि नेपाल सरकारले आरक्षण क्षेत्रमा रहेका झण्डै ३ सय ६३ घरलाई मनहरी गाउँपालिकाको वडा नं. ६ स्थित रमौली र प्रतापपुरमासारेको थियो । जुन बस्तीलाई नयाँ टोल पनि भन्ने गरिएको छ । बाढीले यस क्षेत्रका १२ वटा घरहरु अस्तित्व समेत नरहने गरि पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् भने अन्य सय भन्दा बढी घरहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बाढीबाट प्रभावित छन् ।
पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको जङ्गलको छेउबाट बगिरहेको नदीपानीको बहाव बढे लगत्तै उत्तरतर्फ रहेको उब्जाउ जमिनपट्टि आएको थियो । यसै क्षेत्रमा रहेका १२ वटा घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् । एक्कासी बस्तीमा बाढी छिरेपछि अधिकांश मानिसहरु आफूले लगाएको एकसरो लुगामा नै भाग्न बाध्य भएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
बाढीबाट आंशिक रुपमा प्रभावित भएका मानिसहरुका अनुसार बाढीका कारण स्थानीय क्षेत्रमा रहेको एक विद्यालयमा ३ दिन बसेपछिमात्रै आफ्नो घरमा फर्केका थिए । धेरैजसो आंशिक क्षति भएका घरहरुको जगको माटो बाढीले बगाएको छ । भान्छाको चुलो आँगनमा ल्याइ खाना बनाउन लागेको दृष्य अनुगमनका क्रममा आफूहरुले देखेको बाल कल्याण समाजका कार्यक्रम संयोजक गिरीले बताए । स्थानीयवासीका अनुसार बाढीको कारण वातावरण प्रदुषण भई अधिकांश बालबालिका, महिला तथा वृद्धवृद्धाहरुमा झाडापखाला, रुघाखोकीजस्ता भाइरल रोगहरु देखा पर्न थालेका छन् ।
यस क्षेत्रमा बालबालिकाहरु झण्डै ५० जनाभन्दा माथि रहेको जानकारी पाइएको छ । पीडितहरु आफ्ना सबै सम्पति बगेकाले आफ्नो विचल्ली भएको गुनासो गर्छन् । ‘घरमा खाने, सुत्ने कुराहरु केही छैन । ’ एक बाढी पीडितले भने, ‘लगाउने लुगा पनि बगायो, अब के लगाउने होला ?’
बर्षाको कारण पुगेको क्षतिको अवस्थाका बारेमा अहिले पनि सूचना सङ्कलनमा आफूहरु लागिपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
घुस लिने यस्ता प्रहरी
यस्ता पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, जो संग छन् दुई वटा नागरिकता !
थाहानगरका राजन किन परे पक्राउ ?
थाहानगरका राजन किन परे पक्राउ ? ...
ट्रिपर दुर्घटना हुदाँ १ जनाको मृत्यु
ट्रिपर दुर्घटना हुदाँ १ जनाको मृत्यु...